Izidingo ezi-8 zoFundo olusisiseko lwaMazwe ngaManye aBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2022
Novemba 27, 2021 SAN
I-8 esisiseko sokuFunda kwelinye ilizwe Iimfuno zaBafundi beZizwe
Nalu uluhlu lokufunda kwelinye ilizwe iimfuno zabafundi abaceba ukufundisisa ngaphandle kwelizwe labo nokuba kungokufunda okanye ukuzixhasa.
Ukuba ufuna ukufunda phesheya kwizifundi, kuya kufuneka ugcine ezi mfuno ziluncedo kuba uninzi lwamaziko emfundo afunela ezinye zezi zinto ngexesha lesicelo semfundo.
Ngokuqinisekileyo awuyi kuma ngethuba lokuqwalaselwa ngamathuba okufunda ukuba awunakho ukubonelela ngazo naziphi na iimfuno zesicelo ngexesha elichaziweyo. Ke kungcono ukuba ufunde ngezi zinto ngexesha kwaye uzigcine ziluncedo.
Ngelixa ezinye izikolo zinokukunika ileta yokuqwalaselwa yokwamkelwa ngaphambi kokucela ukuba ubonelele ngezinye zezifundo zaphesheya, iimfuno zemibutho yokufunda iya kuthi icele ezi mfuno kanye kwinqanaba lesicelo.
Kukho iimfuno ezahlukeneyo zamazwe ahlukeneyo kunye nezikolo ezahlukeneyo kodwa phakathi kwazo zonke iimfuno, kukho ezinye ngokubanzi kuwo onke amazwe nakwizikolo zabafundi bamanye amazwe.
Ndithathe ixesha lam ukudwelisa ezo ngokubanzi apha kwaye ndaya phambili ukudwelisa leyo yamazwe ahlukeneyo kunye namaziko kwamanye amaphepha.
Umzekelo, zikhona iimfuno zokwamkelwa kwizikhundla zobugqirha eyunivesithi kwaye nawuphina umfundi ongazifezekisiyo ezi mfuno zichaziweyo ubeka emngciphekweni ithuba lokwamkelwa kwiziko.
Kumazwe, asebenzisa iCanada njengomzekelo, ukuba uyamkelwa nakweyiphi na Iyunivesithi yaseCanada, Kuya kufuneka ucwangcise i-visa yomfundi kwindlu yozakuzo usebenzisa ubungqina bakho bokuqwalaselwa kokwamkelwa kwaye kufuneka ubonelele ngayo yonke Izidingo zeVisa zabafundi baseCanada efunekayo kuwe okanye unokungavunyelwa i-visa eya kuthi ekugqibeleni ikhokelele ekuphulukaneni kwakho nokwamkelwa.
Funda kwelinye ilizwe iimfuno
Ipasipoti / ipasipoti yamanye amazwe
Ngqina lobuchule besiNgesi
Iziphumo zeDegree kunye neTranscript
Ingxelo yeNjongo okanye Isincoko sokwamkelwa
Apha ngezantsi luluhlu lweemfuno ezisisiseko kuya kufuneka uqinisekise ukulungela kwazo ukuba ufuna ukufunda phesheya.
Ipasipoti yamanye amazwe
Ingxelo yeNjongo / isincoko sokwamkelwa
Incwadana yokundwendwela luxwebhu lokuhamba, oluhlala lukhutshwa ngurhulumente welizwe kubemi balo, oluqinisekisa isazisi kunye nobuzwe bomniniyo ikakhulu ngenjongo yokuhamba kumazwe aphesheya.
Iipasipoti eziqhelekileyo zinokuqulatha ulwazi olufana negama lomnini, indawo kunye nomhla wokuzalwa, ifoto, utyikityo kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo lokuchonga.
Ipasipoti yamanye amazwe uhlala ebuzwa ngexesha lesicelo sokwamkelwa kodwa kwimeko apho uqinisekile ukuba ufake isicelo sepaspoti kodwa ayikakulungeli ngaphambi kwexesha lokwenza isicelo sokwamkelwa, unokuvunyelwa ukuba uqhubeke nesicelo ngaphandle kwakho kodwa wena kufuneka ibonelele ngaphambi kokuba iYunivesithi ikunike incwadi yesimemo.
Njengomfundi, ukushiya ilizwe lakho uye kwelinye ngenjongo yokufunda kuya kufuna ukuba ufumane ipasipoti kunye nevisa yomfundi.
Ezi zezinye zezinto eziyimfuneko ongenakuzenza ngaphandle kwaye ziphakathi kwesifundo ngokubanzi phesheya iimfuno zabafundi ekufuneka behlangane nazo ngaphambi kokugqiba uhambo lwabo.
I-visa ligunyaziso olunemiqathango olunikezelwa yintsimi yelinye ilizwe, ebavumela ukuba bangene, bahlale ngaphakathi, okanye bashiye loo ndawo.
IiVisa ngokwesiqhelo zinokubandakanya umda kwixesha lokuhlala kwabaphambukeli, iindawo zelizwe abanokungena kuzo, imihla abanokungena ngayo, inani lotyelelo oluvumelekileyo, okanye ilungelo lomntu lokuba asebenze kweli lizwe kuthethwa ngalo.
Visa yabafundi ayinakufuneka ngexesha lesicelo sokwamkelwa kodwa kufuneka uboniswe ngaphambi kokuba uye phesheya.
Ngokwesiqhelo kufuneka unikwe kwaye wamkelwe kuqala ngaphambi kokuba ufake isicelo seVisa yoMfundi
Ukuqhubeka kwakhona luxwebhu olusetyenzisiweyo kunye nolwenziwe ngumntu ukubonisa imvelaphi yabo, izakhono kunye nezinto abazifezileyo.
Kwimeko yakho njengomfundi, impumelelo yakho kwezemfundo kufuneka ibonakalise ngenkalipho.
Phinda Uqalele yenye yeemfuno zokufunda phesheya ekufuneka uzilungiselele nangaphambi kokuba ufake isicelo.
Kumazwe amaninzi athetha isiNgesi aphesheya, kuya kufuneka unike ubungqina bobuchule besiNgesi ngaphambi kokuba wamkelwe ukuba ufunde.
Esinye sezifundo ezimbalwa eziphambili zokufunda phesheya kwiiyunivesithi ezininzi zamanye amazwe kukuba abafundi kulindeleke ukuba baphumelele kuvavanyo lwesiNgesi njenge-IETLS, TOEFL, okanye naluphi na olunye uvavanyo olwamkelekileyo lwesiNgesi ngaphambi kokuba baqwalaselwe njengokwamkelwa.
Oku kwenzelwa ukuqinisekisa ukuba umfundi uya kwamkelwa akazukuba nexesha elinzima lokufunda nokunxibelelana ngokufanelekileyo ngesiNgesi xa efika eyunivesithi.
Iiyunivesithi zamanye amazwe zihlala zifuna ukuqiniseka ukuba ungayixhasa ngemfundo yakho ukusuka ekuqaleni ukuyokugqiba ngobulumko kwezemali. Baza kucela ubungqina bezezimali ezinokuba sisibonelelo, isibonelelo, imali-mboleko yomfundi, inkxaso-mali yobuqu okanye yosapho.
Kuya kufuneka unike ingxelo yakho yeakhawunti kwaye kwezinye iimeko uxoxe ngendlela abaxhasi bakho abayenza ngayo imali yakhe ukuze iyunivesithi iqiniseke ukuba loo mthombo uzinzile.
Ngelixa ileta yakho yengcebiso inokuvela kumfundisi wakho okanye umfundisi okanye nawuphina umntu ohloniphekileyo kwesi sikhundla, ileta yakho yengcebiso ngexesha lesicelo kwiyunivesithi yamanye amazwe kufuneka ibhalwe nguprofesa kwiyunivesithi yakho yangaphambili.
Ileta yengcebiso yenye yeemfuno zamazwe aphesheya ekufuneka uzilumkele. Ileta yesicelo evela kumthombo ongalunganga inokuhlawula ulwamkelo. Kwabo bafaka izicelo zokufunda kumazwe aphesheya, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto.
Awunakho ukwamkelwa phesheya ngaphandle kokubonisa ingxelo yakho ngexesha lesicelo.
Iziphumo zesidanga sakho kunye nokubhalwa kwakho yinto eza kuxela iziko osifaka kulo ukuba ngaba uyilungele inkqubo oyicelayo.
Ezinye iiyunivesithi zifuna iziphumo ezihle kakhulu zokuqwalaselwa kwabafundi zokwamkelwa kunye nokubhalwa kwakho okuya kuthi ngokuqinisekileyo kubonise zonke iikhosi ozinike isidanga sakho sangaphambili kunye nendlela owenze ngayo kuzo sisikhokelo sokubazisa ukuba ungaphakathi okanye uphumile.
Ngokungafaniyo nezinye iiyunivesithi kwilizwe lakho, iiyunivesithi zamanye amazwe zinokucela ukwazi ukuba yintoni ekhuthazayo ukuba ufake isicelo sokwamkelwa esikolweni sabo kwaye kutheni ukhethe ukufunda ikhosi oyifakileyo.
Oku kuhlala kunzima kwabanye abantu okwenza ukuba baqeshe iinkampani zokubhala izincoko okanye abantu kodwa inyani yile, ingxelo yenjongo sisincoko esithi 'umxholo wayo kufuneka uphume ngentliziyo ukuba usifanele isikolo kunye nesifundo osenzayo.
Ukufundisisa phesheya kuyo nayiphi na inkqubo kufuna ukuba ubonelele ngezatifikethi eziqinisekisa ukuba uyafaneleka okanye ulungele ukwamkelwa kule nkqubo kubandakanya nokubonelelwa ngezatifikethi zenkqubo yakho yangaphambili kunye neziphumo, oku akunakutsibilika kufundo lwamazwe aphesheya iimfuno zayo nayiphi na iyunivesithi yamanye amazwe okanye kwikholeji.
Nokuba uza kufunda phesheya malunga nokufunda okanye ukuzixhasa, ngekhe ukwenze ngaphandle kokungenisa ezi zinto zidweliswe apha ngasentla.
Phakathi kwesifundo esifunwa phesheya, uninzi lweenkqubo zokufunda zifuna ukuba abaxhamli babuyele kwilizwe labo kwangoko emva kokugqitywa kwesifundo, ke xa usenza isicelo sokufunda, lumkela izinto abazenzayo nabangazenziyo.
Iinkqubo zescholarship zipholile kwaye ziyindlela elula kakhulu kwaye eqinisekileyo yokufunda kwelinye ilizwe labafundi abakrelekrele abangenayo imali yokuqhubela phambili imfundo, ngakumbi iinkqubo ezixhaswe ngokupheleleyo zokufunda.
Ukuba ubhalisile kwibhlog yethu akukho mathandabuzo ukuba uya kufumana lonke ufundo phesheya kunye neemfuno zokufunda zaso nasiphi na isikolo okanye ilizwe olikhethileyo. Sinceda ukuba wenze inkqubo yokufunda kwelinye ilizwe ibe lula ngakumbi ngokuhlaziya rhoqo kunye nolwazi.
Kwakhona kunokuba ngumdla ukwazi oko okusingqongileyo.com Uluhlu lweenkqubo zokufunda ziyafumaneka kwizifundo ezinxulumene nokusingqongileyo njengendlela yokukhuthaza ulwazi malunga nokusingqongileyo kunye nozinzo.
Hlala kunye Study Abroad Nations kwaye iphupha lakho lokufunda phesheya kwiziko lakho elikhethiweyo liya kuphila ngenye imini!
Isifundo eCanada ngaphandle kwe-IELTS
Ezona yunivesithi zinexabiso eliphantsi eCanada zabafundi
Iinkqubo zasimahla zeMasters kwi-Intanethi ezineZatifikethi
Ezona ziDyunivesithi zikwi-Intanethi zisimahla
Iikhosi zase-Harvard zeDyunivesithi zasimahla ezikwiSatifikethi
iimfuno zokufunda phesheyaiimfuno zokufunda phesheyaIIMFUNO ZOKUFUNDA KWIINYE IZINTO
Post Previous:IiYunivesithi zaseCanada ezamkela iSAT
Okulandelayo Post:Ixabiso eliphantsi kwi-Intanethi kwi-Bachelors Degree yaMazwe ngaMazwe naBafundi baseKhaya
Matshi 31, 2020 kwi-3: 28 am
Nceda ndenze njani isicelo sobuxhakaxhaka bokufunda eCanada.
Meyi 4, 2020 kwi-7: 29 pm
Ngokufunda inkqubo yesicelo kunye nokulandela amanyathelo ukuba kufanelekile.
U-Mohammed Sani Ammatu uthi:
Disemba 28, 2019 kwi-1: 25 am
Ndifuna ukuya kufunda phesheya.woud u pls ngobubele undibonise inkqubo.Ndiyabulela
Disemba 6, 2019 kwi-11: 28 pm
Ngaba ndiza kuba ne-visa kunye nepasipoti ngaphambi kokuba ndenze isicelo
Disemba 14, 2019 kwi-7: 50 am
Ipasipoti yakho kufuneka ilunge ngaphambi kokufaka isicelo.
UFidelis Osayimwense Obasuyi. uthi:
NgoSeptemba 22, 2019 kwi-1: 05 pm
Kuhle ukufaka isicelo.
Oktobha 21, 2019 kwi-5: 37 pm